Ukubheka Ikusasa Lokukhangisa Ngevidiyo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Novemba 15, 2008 NgeSonto, Novemba 25, 2012 Douglas Karr
IStanford University ikhiphe Zunavision, ubuchwepheshe obuhehayo obuvumela umkhangisi ukuthi afake ngamandla ukushumeka izithombe noma ividiyo kwenye ividiyo - noma ngabe ikhamera ihamba. Ubuchwepheshe obuhehayo kepha anginasiqiniseko sokuthi buzokwamukelwa kabanzi ngenxa yobunjalo bayo. Mhlawumbe uma zingenzi izikhangiso zicace bha.
Isithembiso esisodwa salolu hlobo lobuchwepheshe kungaba sembonini yama-movie ukwenza ukubekwa komkhiqizo ekukhiqizeni okuthunyelwe. Lokho kunganikeza ukonga okukhulu embonini yama-movie ngokungadingi futhi uqophe amathuba wokukhangisa ngaphambi kwesikhathi. Futhi, bekungeke kudinge impahla yokukhangisa ebonakalayo.
Uma ubuka nge-RSS futhi ungayiboni ividiyo, chofoza ukuthola isibonelo sefayela le- Ubuchwepheshe bokushumeka ividiyo yaseStanford Zunavision.
Tags: ubuchwepheshe be-stanfordukukhangisa ngevidiyo
Yeka Ukubheja, Masitshale Amathuba
Nov 15, 2008 ngo-2: 51 AM
Lokho kuyamangalisa ngempela uDoug. Kuthiwani uma abakhangisi bengakwazi ukufaka kuphela "ibhodi lokukhangisa" labo ngaphakathi kwevidiyo, kodwa futhi nokuxhumanisa leyo ndawo yevidiyo ku-URL? Kukhona iqhinga lokwenza imali le-YouTube lokuthi uma indawo ongayichofoza ikwazile ukubonwa ngumsebenzisi ngandlela thile.
FYI, ngicabanga ukuthi isixhumanisi sakho sabantu be-RSS sithola ikhasi lakho le-404.
Nov 16, 2008 ngo-10: 04 PM
Ubuchwepheshe obusha bevidiyo nokukhangisa obufana nalobu bujabulisa kakhulu kimi ngokubuka okusha. Angihlatshwa umxhwele amasayithi azama nje ukuphindaphinda i-YouTube futhi ayisebenzise ku-niche ethile efana nokuthi kwenziwa kanjani amavidiyo, noma amavidiyo we-porn, noma yini onayo. Qhubeka uphusha imvilophu ngobuchwepheshe obusha futhi ngiyajabula.
Nov 17, 2008 ngo-3: 06 AM
ngiyabonga ngendatshana enhle